नेपाल लाइफको यस्तो प्रगति, बिमाशुल्क आर्जनमा छलाङ ! Bizshala -
कर्मचारी एम्बुलेन्समा , मदिरा दूध बोक्ने गाडीमा
नेपाल लाइफको यस्तो प्रगति, बिमाशुल्क आर्जनमा छलाङ !
काठमाण्डौ । जीवन बिमा कम्पनीहरुमध्येकै टप कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्म ४७ करोड ९२ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो कम्पनीको बिमांकीय मूल्यांकन पश्चात प्राप्त हुने मुनाफा गणना नगरिएको नाफा हो ।
कम्पनीले समीक्षा अवधिमा १६ अर्ब बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १२ अर्ब बढी बिमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।
नेपाल लाइफले पुनर्बिमा कमिसनबाट १ करोड ६४ लाख आम्दानी गरेको छ भने लगानी कर्जा तथा अन्यबाट ३ अर्ब ९७ करोड आर्जन गरेको छ । बिमालेखको धितोमा कर्जाबाट हुने आय ९० करोड ९८ लाखको उचाईमा पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा नेपाल लाइफले पुनर्बिमा कमिसनबाट २ करोड ४९ लाख, लगानी, कर्जा तथा अन्यबाट २ अर्ब ५० करोड, बिमालेखको धितोमा कर्जाबाट ५१ करोड २६ लाख आम्दानी गरेको थियो ।
कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ५ अर्ब ४३ करोड खूद दाबी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यस्तो भुक्तानी २ अर्ब ८८ करोड मात्र थियो ।
हालसम्म यो कम्पनील ११ लाख ५२ हजार ८ सय ६० वटा बिमालेखाहरु जारी गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म १० लाख ४१ हजार ८ सय ६९ बिमालेख मात्र जारी भएको थियो । यसरी एकवर्षमै कम्पनीले बिमालेखको संख्या समेत उल्लेख्य रुपले बढाएको देखिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा नेपाल लाइफको प्रतिसेयर आम्दानी १०.९० रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १८७.५४ रुपैयाँ, पीई अनुपात ९६.३३ गुणा र औसत प्रतिफल दर १०.८३ प्रतिशत कायम भएको छ । बिमांकीय मूल्यांकनपछि प्राप्त हुने मुनाफा जोड्दा यी वित्तीय अनुपातहरु फरक पर्नेछन् ।
nepal life insurance 4th quarter 2074/75